An wedge anchor ndeye michina yemhando yekuwedzera anchor iyo ine zvikamu zvina: iyo yakamisikidzwa anchor muviri, yekuwedzera clip, nut, uye washer. Aya anchor anopa akakwirira uye ari nani anowirirana akabata kukosha kupfuura mazhinji eanogadzira mhando yekuwedzera anchor
Chikemikari chinotsigisa iri mhando nyowani yechitsigiso bhaudhi iyo ine chemakemikari mishonga Uye yesimbi tsvimbo. Izvo zvigadzirwa zvinogona kushandiswa kumachira emaketeni masisitimu ekugadzirisa, michina uye kuisirwa kwemidziyo, gadhi yekuisa mugwagwa mukuru uye zambuko, uye kuiswa kwezvivakwa zvesimbi, windows uye zvichingodaro
Mbeu refu, inosanganisira hexagonal mhando uye yakatenderera mhando, iri kushandisa kubatanidza akasiyana zvinyorwa kubva kumicheto miviri. Mune zvimwe zviitiko, zvinoda kuti chinyorwa chipinde mukati zvakaenzana, saka pane mhando yepakati yakanongedzwa (muchikamu chepakati, chakatsimbirirwa, chinyorwa chichavharwa kana uchipinda pachinzvimbo).
Anchor yemaoko, yekushandisa mugomba risati racherwa mukongiri, huni kana masonry uye zvimwe zvakafanana zvinosanganisira bhaudhi ine tambo yekunze yakasungirirwa yekutambira nhengo yemukati yakamanikidzwa, semuenzaniso, nzungu. Iyo yekupedzisira magumo inotsanangura shank inogumisa mumusoro wehupamhi wakakura kupfuura shangi. Musoro une tapered wedge-inogadzira bendekete rinosangana ne shank. Sleeve inoraswa yakanangana pamusoro pebhaudhi uye inosanganisira kora inotambanudza pamwe nechikamu chakamisikidzwa chebhaudhi kumucheto wayo wekunze kuraswa nekutambira kumanikidza kwenguva refu kumucheto wemukati mebhaudhi inogadzirwa nekusimbisa kweiyo nati.
Bhaudhi inosunga pamwe neshinda yekunze, inowanzo kuve nemusoro muviri wayo wakakoshwa, kazhinji unowirirana nenzungu, yezvinyorwa zvekusunga. Iyo tambo inonyanya kuve nemhando mbiri, BS (UNC) tambo uye MM tambo. Nzvimbo dzakasiyana dzichava nezvinodiwa zvakasiyana patsika yekushandisa.
Nzungu inonama asi yakapfava asi inoshandiswa zvakanyanya; inogona kusunganidzwa nesikuru, bhaudhi, tsvimbo yakakoshwa kana anchor bhaudhi muviri kugadzirisa zvinyorwa. Kune akawanda mwero, senge DIN, ASME, BSW, kana ISO zviyero. Iyo tambo inonyanya kuve nemhando mbiri, BS (UNC) tambo uye MM tambo. Nzvimbo dzakasiyana dzichava nezvinodiwa zvakasiyana patsika yekushandisa.
Kuzvibata-wega (Yekudzidzira kuchera sikuruu) sikuruu iyo inogona kukwenya gomba rayo sezvo ichiendeswa mune izvo zvinhu. Zvishoma nezvishoma, kuzvirovera-wega kunoshandiswa chete kutsanangura imwe mhando yeshinda-yekucheka sikuruu yakagadzirirwa kuburitsa tambo mune zvakapfava zvinhu kana pepa zvigadzirwa, kusanganisa zviuno zvehuni. Dzimwe dzakananga mhando dzekuzvibata-tora sikuru dzinosanganisira dzekuzvicheka-screws uye tambo yekumonera screws.